Kitra : ho fantatra, anio, ny ho filohan’ny federasiona | NewsMada
Kitra : ho fantatra, anio, ny ho filohan’ny federasiona
Mitodika aty Toliara avokoa ny mason’ny mpitia baolina kitra rehetra, amin’ity asabotsy 24 aogositra, ity. Hotanterahina amin’ity anio ity, manomboka amin’ny 9 ora maraina, ao amin’ny hotely Dune d’Ifaty, mantsy ny fifidianana ho filohan’ny federasiona malagasy (FMF).
Efa vonona ny fikarakarana rehetra, araka ny nambaran’ny tomponandraikitry ny “comité de normalisation”. Efa tonga eto an-toerana, omaly zoma, avokoa ireo filohan’ny ligim-paritra 22, manana zo handatsa-bato. Mitoby amin’ny hotely iray eto Toliara izy ireo ary tsy misy mahazo mifanerasera aminy ireo kandidà dimy mirahalahy mianaka, mandra-pahavita ny latsa-bato.
Samy manana ny toerana hipetrahany kosa ireo mpifaninana izay tsy afaka mifandray amin’ny olona ihany koa. Ankoatra izay, hanokatra ny fivoriambe fanatontosana ny fifidianana ny fampahatsiahivana ataon’ny “comité de normalisation” ireo andinin-dalàna mifehy izany. Hisy koa ampahany kely hanaovana tatitra momba ny fotoam-piasan’ny “comité de normalisation”.
Hanatrika ity fifidianana ity i Veron Mosengo Omba, tale eo anivon’ny federasiona iraisam-pirenena (Fifa) misahana an’i Afrika. Mialoha ny tena hanaovana ny latsa-bato, hanana anjara fitenenana 5 mn avy izy dimy mirahalahy mianaka: Rabekoto Raoul Romain, laharana voalohany, sy i Mohamad Abdillah Abdou, laharana faharoa; Andriamiasasoa Doda, laharana fahatelo; Rasoamaromaka Hery, laharana fahefatra ary Rakotomamonjy Neypatraiky, laharana fahadimy.
Tsiahivina fa lany ho filohan’ny federasiona malagasin’ny baolina kitra ny kandidà mahazo ny antsasa-manilan’ny vato manankery. Hisy kosa ny fihodinana faharoa raha toa ka tsy misy izany ka ireo kandidà roa nahazo ny vato be indrindra no miatrika izany. Miditra amin’ny fihodinana fahatelo ny latsa-bato, raha toa ka mbola mitovy ny isa ary ho lany izay zokiny raha toa ka mbola sahala indray izany, eo amin’ny fihodinana fahefatra.
Hiara-dalana amin’io ihany koa ny fifidianana ireo ho mpikambana ao amin’ny komity mpanatanteraka miisa 10.
Tompondaka (Iraka manokana aty Toliara)